Maalinta: Noofambar 14, 2018
War saxaafadeed ka soo Baxay Madaxa Sahin ilaa Gaarayaasha Dadweynaha ee Gaarka loo leeyahay
Dhibaatada ugu weyn ee haysata basaska dadweynaha ee gaarka loo leeyahay, marinnada bilaashka ah ee ka yimaadda xuquuqda Duqa Magaalada Samsun ee Magaalo Weyn Zihni Sahin ayaa ku saabsan warka wanaagsan. Guddoomiye Kaahin, ”oo ka soo baxa ganacsiyada rakaabka ee Samsun [More ...]
Duqa magaalada Toçoğlu wuxuu la yimid xubnihii golaha farshaxanka ee Sakarya Minibusmen iyo madaxdii istaagta oo wuxuu yiri: Waxaan la shaqeynaa ganacsatadayada [More ...]
Duqa magaalada Zonguldak Muharrem Akdemir, Halkinsesi'den Emre Can BAYRAM'a wuxuu dhameystiray isgoyska, mashruuca dariiqa iyo basaska laga sameeyay safarada. Duqa magaalada Zonguldak Muharrem Akdemir, oo leh dhismaha isku xirka smart [More ...]
Kulanka Guddiga DTD waxaa lagu qabtey Asyaport
Shirka Gudiga Xiriirka Gaadiidka tareenka (DTD) ee 06 Noofambar 2018 waxaa lagu qabtay Asyaport Tekirdağ. Ka hor kulanka, maamulayaasha Asyaport iyo xubnaha guddiga DTD ayaa isugu yimid casho iyo waaxda iyo horumarka [More ...]
Xarunta sayniska Kocaeli, oo u adeegta gudaha Kocaeli Metropolitan Municipality, waxay qabanqaabisay munaasabad dhalasho oo loogu talagalay carruurta da'doodu u dhaxayso 6 - 9. Munaasabadda, oo lagu qabtay aqoon isweydaarsiyo iyo bandhigyo saynis ah, carruurtu waxay ku qaateen waqti xiiso leh. [More ...]
Adeegga Shaqaalaha ee lagu rakibayo Nidaamka Raadiyaha ee Tawxiidyada Qaybta Qadka-Kaarbaanka-Xudduudaha (TÜLOMSAŞ)
Qeybta Booliska Magaalada Diyarbakır Booliska Magaalada, 3. Gawaarida warshadaha ayaa ka tagay waxayna sababaan wasakhowga deegaanka ee meelaha baabuurta la dhigto ee baabuurta la jiido. Qeybta Booliska Magaalada Diyarbakır Booliska Magaalada, 3. Maamulka Goobta Warshadaha [More ...]
Duqa Ciidamada Engin Tekintaş wuxuu sii wadaa inuu ka jawaabo dalabka muwaadiniinta. Duqa Tekintaş ayaa sheegay in ka dib markii hoos loo dhigay qiimaha biyaha iyada oo la raacayo baahida muwaadiniinta, dhimista 33 ee khidmadaha gawaarida la dhigto. gawaarida [More ...]